Ọ na-eme ka anyị na ụmụnna anyị bụrụ ezigbo enyi. Anyị na ụmụnna anyị dị ná mma, ha bụkwa ezigbo ndị enyi anyị. Ọ bụghị naanị mgbe anyị gara ọmụmụ ihe ka anyị na ha na-akpakọrịta, anyị na-ewepụtakwa oge ka anyị na ha nọkọọ tụrụ ndụ. Olee uru anyị na-erite n’oge ahụ? Anyị na-achọpụtakwu àgwà ọma onye nke ọ bụla nwere, ya emee ka anyị hụkwuo ibe anyị n’anya. E nwezie onye n’ime anyị nwere nsogbu, anyị agbatara ya ọsọ enyemaka ozugbo. (Ilu 17:17) Ebe ọ bụ na anyị na ndị niile nọ n’ọgbakọ anyị na-akpa, o gosiri na anyị ‘na-elekọta ibe anyị.’—1 Ndị Kọrịnt 12:25, 26.
mailto:?body=Olee Uru Anyị Na-erite ma Anyị na Ụmụnna Anyị Na-akpakọrịta?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012147%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Uru Anyị Na-erite ma Anyị na Ụmụnna Anyị Na-akpakọrịta?